Ma u baahan tahay ruqsaddaada waxbarasho, tababar ama waxqabadyo xirfadeed? Raadi sida loo maalgeliyo!
Dhaqdhaqaaqa waa arrin dhab ah oo ku saabsan isdhexgalka xirfadeed: meelaha qaarkood, liisanka wadista baabuurtu waa rukhsad shaqo oo dhab ah, gaar ahaan dhalinyarada. Raadi xalalka iyo gargaarka gobolka ee kaa caawinaya maalgelinta liisankaaga wadista.
Tan iyo Janaayo 1, 2019, dadka waaweyn ee tababarka qaata waxay ka faa'iideysan karaan gargaarka gobolka ee 500 euro si loo maalgeliyo liisanka darawalnimada. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan maalgelinta gargaarka ruqsadda darawalnimada B ee tababbarka.
Tixgeli inaad u isticmaasho koontadaada tababarka shaqsiyeed (CPF) maalgelinta imtixaanka liisanka darawalnimada (koodhka iyo casharrada wadista).
Si aad uga faa'iideysato, waa inaad labadiinuba:
helitaanka ruqsadda waxay gacan ka geysaneysaa ku guuleysiga mashruuc xirfadle ah ama kor u qaadista amniga xirfadda mihnadeed ee qofka haysta koontada; iyo in qofka haysta koontada aan lagu xiraynin shatigiisa ama laga mamnuuco codsashada shatiga (waajibaadkaan waxaa lagu xaqiijinayaa shahaado sharaf ku saabsan qofka ay khuseyso).
Si loo daboolo, diyaarintani waa inay bixisaa hay'ad la ansixiyay iyo
Gargaarka maalgelinta shatiyada wadista baabuurta ee dhalinyarada July 10th, 2021Tranquillus
READ Shaqooyinka QHSE sida uu arkay Alban Ossart, lataliyaha iyo tababaraha IFOCOP
horeHeshiisyada wadajirka ah: marka shaqaaluhu si qaas ah u siiyo talooyin, ma dalban karaa lacag-bixinta saacadaha shaqada ee dheeraadka ah?
socda“Kala guurka wadajirka ah”: dib u tababbarka dariiqa lagu beddelayo shaqooyinka